Sheekada Filimka Badla: Amitabh Iyo Taapsee Waxay La Imaadeen Filim Qayaano Heer Sare Ah – Filimside.net
Sheekada Filimka Badla: Amitabh Iyo Taapsee Waxay La Imaadeen Filim Qayaano Heer Sare Ah
March 9, 2019 Aadan Muriidi
Taariikhda: March 9, 2019
Waxaa shalay tiyaatarada la saaray filimka Badla oo ah filim qayaano iyo baaritaan ah oo sheeko ahaan laga soo min qaatay filimka caanka ah THE INVISIBLE GUEST.
Bollywood markaan waxay u jeesteen inay sameeyaan filim fariin qayaano iyo baaritaan ah sameeyaan maadaama fariimo filimadaas oo kale looga haray reer galbeedka.
Filimka sanadahaan danbe ugu caansan ee Bollywood-ka sameeyaan fariin ahaan qayaano iyo baaritaan xambaarsan waa Kahaani oo la daawaday sanadii 2012 waxaana sameeyay filim sameeye Sujoy Ghosh oo sidoo kale director ka ah Badla.
Hadaba filim sameeye Sujoy Ghosh, waxaa laga sugaaya filim fariintiisa sareyso maadaama uu isku keenay jilaayaasha filimka Pink ee Amitabh Iyo Taapsee maxaa laga filan karaa filimka Badla oo qof walbo indhaha ku haayo fariinta filim sameeye Sujoy Ghosh, la imaan doona.
Jilaayaasha: Amitabh Bachchan, Taapsee Pannu, iyo Amrita Singh
Waqtiga uu socanaayo filimkaan: 1-saac iyo 55 daqiiqo
Fariinta filimka Badla oo kooban: wuxuu ku saabsan yahay marwo lagu soo eedeeyay dil Naina Sethi (Taapsee Pannu) waa marwo ka gaaray ganacsiga waxay ku nooshahay London waana xaas sidoo kale gabbar yar u joogto. laakiin maalin ayaa nolasheeda dhinac u wareeganaysa marka lagu soo eedeeyay inay dil u geysatay jaceylkeeda Arjun Joseph (Tony Luke). cadeen walbo oo lasoo bandhigo waxay cadaynaysa in Naina Sethi (Taapsee Pannu) ka danbeysay dilka jaceylkeeda maadaama iyada aheyd qof kale kalii qolka kula jiray jaceylkeeda Arjun Joseph (Tony Luke).
Laakiin Naina Sethi (Taapsee Pannu) ayaa mar walbo sheegeysa in qolka kula jiray nin seddaxaad oo ka danbeeyay qorshaha dilka sidoo kalena iyada dhaawac kaga geystay wajiga. laakiin maxkmada ayaa cadeynaysa in qolka uu ka xirnaa gudaha sidoo kale cadeemaha kale waxay tilmaamaayaan in qofna banaanka u soo baxin.
Abukaataha Naina Sethi (Taapsee Pannu) Jimmy Punjabi (Manav Kaul) ayaa u sheegaaya in kiiskaan farihiisa ka baxi rabto intaan ka dibna uu badbaadi karin. laakiin wuxuu u sheegaaya inay qabsato abukaataha awooda badan marna guul dareysan Badal Gupta (Amitabh Bachchan).
Badal Gupta (Amitabh Bachchan) ayaa u sheegaaya in Naina Sethi (Taapsee Pannu) wax walbo oo kiiskaan ku saabsan banaanka soo dhigto si uu kaga bad baadiyo maxkamada waxayna u sheegaysa in Arjun Joseph (Tony Luke) ku lug lahaa wiil dhalinyaro ah lagu magacaabo Sunny Kaur oo laga waayay gobalka yar Aviemore. maxaa xiga oo dhaci doona ayaa ah waxa loo daawan doona filimka Badla.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Badla: Filimkaan sheeko ahaan waxaa laga soo min guuriyay filimka Ispaniska ah ee THE INVISIBLE GUEST filim sameeye Sujoy Ghosh ayaana filimkaan si heer sare ah u sameeyay inkastoo uu gaarin orijaanlkiisa hadana waa filim heer sare qof walbana soo dhaweyn weyn ka helay sidoo kalena la wada amaanay fariintiisa.
Bandhiga Jilaayaasha: Sida caadad aheyd mar kale ayuu shaashada la wareegay halyeey Amitabh Bachchan kani waa halyeeygaan marna bollywood-ka kama maarmin.
Taapsee doorkeeda waa mid heer sare ah marka kale waxay cadeysay in fariin walbo diyaar u tahay sidoo kalena la tartami karto atariishooyinka bollywood-ka hogaanka u heeyaan.
Laakiin waxaa kaa yaabin doona doorka halyeeyada Amrita Singh oo door muhiim laga siiyay filimkaan waxayna mar kale cadeesay in filimaan badan sameyn karto. sidoo kale jilaayaasha Tony Luke, Denzil Smith, waxay ku leeyihiin doorar yar balse muhiim ah.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Badla:
Fariintiisa filimkaan xambaarsan yahay iyo hadaladiisa oo heer sare.
Muusigada gadaal ka yeerayso (Background Score) soo si wanaagsan loo diyaariyay.
Jiliinka Amitabh, Taapsee iyo Amrita iyo fariintiisa qayaanada iyo dilka oo heer sare ah.
Muxuu Ku Liitaa Badla:
Filimkaan malaha madadaalo ama kuma jiraan heeso kusoo jiidanaayo.
Waqiga uu socanaayo waxaa loo baahnaa in 10 ilaa 12 daqiiqo laga jaro inkastoo xiiso uu leeyahay.
Qiimeynta Sheekada Badla: 3.5/5 (Sedex xidig iyo bar)
Gunaanad: Badla waa filim ka hadlaayo qayaano arimaha dilka ku saabsan sidoo kalena qof walbo xiisaynaayo filimkaan sida asigoo bollywood ah loo dhigay ama xiisaha uu yeelan doona midaas oo ka caawin doonto in filimkaan uu boxoffice-ka guul ka gaaro.
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska filimka Filimka Badla.